Izici, izinhlobo namandla wezixuku zomoya | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ubuningi bomoya bungachazwa njengengxenye enkulu yomoya enokwelulwa okuvundlile kwamakhilomitha angamakhulu amaningana. Inezakhiwo zomzimba ezinjengezinga lokushisa, okuqukethwe umswakama kanye ne-gradient yokushisa mpo okufana ncamashi. Kusukela izindimbane zomoya Zibaluleke kakhulu kwizimo zezulu nakwisimo sezulu, sizonikezela le ndatshana ephelele ukuze sazi izici namandla aso.
Uma ufuna ukwazi yonke into ehlobene nezindikimba zomoya, lokhu okuthunyelwe kwakho.
1 Izinhlobo zezindimbane zomoya
2 Amandla ezinqwaba zomoya
2.1 Umphumela weCoriolis
2.2 Umoya we-Geostrophic
2.3 Amandla Frictional futhi Ekman Kuvunguza
Izinhlobo zezindimbane zomoya
Njengoba sishilo ngaphambili, le ngxenye enkulu yomoya enokwelulwa okuvundlile nezakhiwo ezithile zomzimba yilokho esikubiza ngokuthi ubukhulu bomoya. Zihlukaniswa ngokwezakhiwo zomzimba ezinazo, ikakhulukazi ngokushisa. Kuncike ekushiseni kwesisindo somoya sithola izinqwaba ezibandayo, njenge-arctic ne-polar, noma efudumele, njengezinqwaba zomoya ezishisayo. Kukhona nezinye izinhlobo zezigaba ngokusho komswakama wazo, okungukuthi, okuqukethwe kwawo umhwamuko wamanzi. Uquqaba lomoya nge okuqukethwe okuncane emhosheni wamanzi kubizwa ngobuningi bezwekazi. Ngakolunye uhlangothi, lezo lezo uma eza ethwele umswakama yiwo asolwandle, ngoba zivame ukuba sezindaweni eziseduze nolwandle.
Kunezindawo eziphakathi nendawo lapho sithola khona izindimbane zomoya ebusika nasehlobo bese zishayisana ngohlobo lwazo. Lezi zindawo yizindawo ezibizwa ngama-air fronts kanye nendawo ye-Intertropical Convergence.
Amandla ezinqwaba zomoya
Manje sizohlaziya amandla eziqu zomoya ukuze siqonde kabanzi ngakho. Kukhona ukunyakaza endizeni enezingqimba zesisindo somoya okulungiswa ingcindezi yasemkhathini ebusweni bomhlaba. Lokhu kuhamba kwenqwaba yomoya kwaziwa njenge-gradient yengcindezi. Umoya uvamise ukusuka endaweni lapho kunengcindezi enkulu iye lapho kuncane khona. Lokhu kusakazwa yilokho okusungula ukugeleza komoya noma i-gradient.
I-gradient ichazwa ngokwehluka kwengcindezi esingakuthola. Ukuphakama kokwehluka kwengcindezi kulapho umoya ujikeleza kakhulu. Lokhu kwehluka kwamanani okucindezela endizeni evundlile kunesibopho sezinguquko ekusheshiseni kwenqwaba yomoya. Lokhu kusheshiswa kuboniswa njengokuguqulwa kwamandla ngeyunithi ngayinye futhi kubhekiswe kuma-isobars. Lokhu kushesha kubizwa ngokuthi amandla we-gradient yengcindezi. Inani lala mandla liphambene ngokulingana nobukhulu bomoya futhi lilingana ngqo ne-gradient yengcindezi.
El umphumela we-coriolis Kubangelwa ukunyakaza okujikelezayo koMhlaba. Ukuphambuka okukhiqizwa yiplanethi kumasimu womoya ngenxa yeqiniso lokunyakaza okujikelezayo. Lokhu kuphambuka okukhiqizwa yiplanethi kumasimu womoya ngenxa yokunyakaza kokujikeleza kwaziwa njengomphumela weCoriolis.
Uma siyihlaziya ngokubuka kwejometri, kungashiwo ukuthi izindimbane zomoya zingathi zihamba ngohlelo lokuxhumanisa oluhambayo. Ubukhulu bamandla eCoriolis ngeyunithi ngayinye bulingana ngqo nejubane eliqondile umoya olithwele ngaleso sikhathi kanye nejubane le-angular lokujikeleza koMhlaba. La mandla nawo ayahluka ngokuya ngobubanzi esikubo. Isibonelo, lapho sise-Equator, ngobubanzi be-0, amandla eCoriolis akhanseliwe ngokuphelele. Kodwa-ke, uma siya ezigxotsheni, kulapho sithola khona amanani aphakeme kakhulu eCoriolis, ngoba ububanzi bungamazinga angama-90.
Kungashiwo ukuthi ibutho leCoriolis lihlala lisebenza ngokuya ngokuqondiswa kokuhamba komoya. Ngale ndlela, kunokuphambuka kwesokunene noma kunini lapho siseNyakatho Nenkabazwe, nakwesobunxele uma siseNingizimu Nenkabazwe.
Impela ngokuhamba kwesikhathi wake wakuzwa kwesinye isikhathi noma ezindabeni. Umoya we-geostrophic yiwo otholakala ku- isimo samahhala esivela ekuphakameni kwamamitha ayi-1000 futhi sishaye sicishe silingane ne-gradient yokucindezela. Uma ulandela indlela yomoya we-geostrophic, uzothola izingcindezi eziphakeme ezingakwesokudla nezingcindezi eziphansi ezingakwesobunxele enyakatho nenkabazwe.
Ngalokhu siyabona ukuthi amandla we-gradient yengcindezi alinganiswa ngokuphelele ngumbutho weCoriolis. Lokhu kungenxa yokuthi basebenza ohlangothini olufanayo, kodwa kolunye uhlangothi. Isivinini salo moya silingana ngokungafani ne-sine of latitude. Kusho ukuthi kwi-gradient efanayo yengcindezi ehlotshaniswa nomoya we-geostrophic, sizobona ukuthi ijubane lokujikeleza lehla kanjani njengoba siya ezindaweni eziphakeme.
Amandla Frictional futhi Ekman Kuvunguza
Siqhubeka nokuchaza esinye isici esibalulekile kumandla ezinqwaba zomoya. Ukungqubuzana komoya, ngenkathi kwesinye isikhathi kubhekwa njengokuncane, akudingeki kube njalo. Lokhu kungenxa yokuthi ukungqubuzana onakho nomhlaba kunomphumela obaluleke kakhulu ekufudukisweni kokugcina. Kubangela ukuthi isivinini somoya sehle lapho siseduze kobuso kumanani angaphansi komoya we-geostrophic. Ngaphezu kwalokho, kubangela ukuthi idlule kuma-isobar ngokusobala kakhulu lapho kuqondiswa khona i-gradient yengcindezi.
Ibutho lokungqubuzana lihlala lisebenza ngakolunye uhlangothi lapho lihamba nenqwaba yomoya. Uma izinga lokuzibophezela maqondana nama-isobar lincipha, umphumela wokungqubuzana uyehla, njengoba sikhuphuka siye ekuphakameni okuthile, cishe ngamamitha ayi-1000. Kuleli qophelo imimoya i-geostrophic futhi amandla okuqophisana cishe awekho. Njengomphumela wamandla okulwa phezulu, umoya uthatha indlela evunguza eyaziwa ngokuthi i-Ekman Spiral.
Njengoba ubona, amandla eziqu zomoya ayinkimbinkimbi. Kunezici eziningi okufanele uzicabangele. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngalo futhi ucacise ukungabaza okuthile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Uquqaba lomoya